Inzuzo yokusebenzisa Izithombe ze-3D Ukukhuphula Amanani Okubandakanya Ukuthengisa
Inzuzo yokusebenzisa Izithombe ze-3D ukukhuthaza Inkampani noma ibhizinisi lakho
Ukuthuthukiswa kwe-AI nemisebenzi ye-3D Image
Ngokuthuthuka okukhulu embonini ye-AI, amabhizinisi athola ukuqonda okuhle kusuka kule golide entsha yedatha yokuhlaziya. Ngenkathi le datha eqhutshwa yi-AI ingasiza ukukhulisa ukuzibandakanya kokukhangisa kwezikhangiso zokubonisa, amawebhusayithi, nokuthunyelwe kwabezindaba zenhlalo, abathengi abaningi sebevele bazivumelanise ukuthi babone lezi zikhangiso, bedinga indlela entsha yokwenyusa amanani entengo yokuthengisa. Yilapho ubuchwepheshe be-AI bungena khona.
Umsebenzi omusha omuhle wezobuchwepheshe be-AI yikhono lokuguqula noma yisiphi isithombe esijwayelekile sibe esisebenzayo Isithombe se-3D. Izinkampani ezintsha zithanda I-LucidPix ziyachuma ngaphakathi kwale nkundla yokudlala entsha, lapho kukhona ukuncintisana okuncane nokucabanga okuningi. Iningi labathengi namanje alazi ngalolu hlelo lokusebenza lwe-AI, ngaleyo ndlela amabhizinisi angenisa ubuchwepheshe obusha ukuheha ukunaka komthengi. Lapho abantu ukubuka ubuchwepheshe obusha kubo, abangakaze bakubone ngaphambili, cishe bayamangaliswa futhi bafuna ukwazi ngayo. Lokhu kudlala emvelweni yethu yemvelo yomuntu, lapho, lapho sithola okuthile, iba yinjongo yethu yemvelo ukuqonda into, ngaleyo ndlela silethe ukunaka okugcwele kwengqondo yomuntu ekutholakaleni. Unale nto engqondweni, amabhizinisi anethuba elihle lokuthuthuka imithombo yezindaba ifinyelela nokwanda kwemakethe.
Izicelo zebhizinisi zezithombe ze-3D
Kusetshenziswa amasu wokuqagela okwenziwe kabusha we-AI 3D kwemithombo yezokuxhumana, yokuhweba, neyezendabuko kunamandla amakhulu kakhulu khulisa ukuzibandakanya kokuthengisa, ukufinyelela, kanye nokuvelayo sanoma isiphi isithombe esijwayelekile esingasetshenziswa yinkampani. Ngokwanda okukhulu lokhu, kuvumela izinkampani ukuthi zithole okuningi ngedola lazo lokuthengisa, zikhuphula inzuzo yazo kanye nokubuya kwazo ekutshalweni. Lezi izindleko ezilondoloziwe kanye nenzuzo ekhuphukile ingagqugquzela amabhizinisi amaningi ekubeni angazisizi ekwenzeni imali masonto onke. Umphumela omangazayo kakhulu ungatholakala emabhizinisini amancane, athembela kuYelp nakwamanye amapulatifomu esixuku esixuku ukuhambisa amakhasimende kubhizinisi labo. Uma indawo yokudlela encane yomndeni ingathola amanye amakhasimende ayisihlanu ngosuku ngenxa yezithombe zayo, ingahle isuke ekuqhekekeni ibheke ekuboneni ukukhula kwemali futhi ingavumela ukwanda futhi ikhule ezimakethe zayo. Ngama-upsides amaningi kangaka kulobu buchwepheshe, kuyamangaza ukuthi kungani bambalwa abawusebenzisa njengamanje.
Imvamisa, lapho kufika ubuchwepheshe obusha, abaqalisi bokuqala kumele balwe nezinqubo eziyinkimbinkimbi ukufeza izinhloso zabo, noma kunjalo lokhu akudingeki kube njalo. Kukhona izinkampani, ezifana I-LucidPix, edale uhlelo lokusebenza olulula lwe-AI okulula ukuyisebenzisa cishe ayikho ijika lokufunda. Izinhlelo zokusebenza ezinjengalezi ziyakwazi ukudala izithombe ze-3D ngokuthepha okukodwa kwesikrini, zenze noma ngubani ubuhlakani uma kukhulunywa nobuchwepheshe be-AI. Lokhu kuvumela abasebenzisi be-novice ukuthi babone amandla aphelele wohlelo lokusebenza nesikhathi esincane sokuqeqeshwa nomzamo.
Uma ungumnikazi webhizinisi noma umakethi, leli yithuba lakho lokuba ngumsunguli wokuqala uma kukhulunywa ngezithombe ze-3D. Ukukhetha kungokwakho, kepha ikusasa licacile. Ukuthwebula izithombe kwe-3D okuqhutshwa i-AI lapha kuzohlala futhi nakanjani kuzokwandisa ukubandakanyeka kokuthengisa kanye nakho. Ungaba umsunguli wokuqala bese uhlangabezana nazo zonke izinzuzo zendlela entsha yokumaketha, noma ulinde kuze kufike wonke umuntu akushiye othulini.
Ngakho-ke, kungani Landa i-LucidPix?